DAT Video Converter: Sida loo Beddelaan DAT in MP4, wmv, MOV (Quicktime) iwm
> Resource > Beddelaan > Sida loo Beddelaan DAT in MP4, wmv, MOV (QuickTime)
Mararka qaarkood ma waxaad ka furan kartaa filim ku saabsan file avseq.dat, ama ma video dajiyaan karaa ka VCD ama file AVSEQ01.DAT galay FCPX. Si aad u xallin dhibaatadaada, waxaad u baahan tahay si loogu badalo DAT videos in MP4, wmv, MOV (QuickTime) iyo inta badan kale oo caan ah, heerka qaabab video on Windows iyo Mac. Maqaalkani waxa uu ku talin doonaa Converter ah DAT video weyn si ay kuu caawiyaan. Just aad u hesho hoos ku qoran.
Best DAT video Converter for Windows / Mac (El Capitan ka mid ah)
• Beddelaan DAT in MOV, MP4, wmv, AVI, iyo SD ka badan, 3D iyo qaab HD video.
• Beddelaan DAT in telefoonada gacanta, QuickTime, Final Cut Pro oo iMovie la presets filaayo.
• shakhsiyeeyo DAT video sida video tafatirka qalab xirfadle by falinjeeerka, lana siii, isagoo intaa ku daray Cinwaan.
• Gubashada files DAT in disk DVD dadaal no a.
Qaybta 1aad: Sida loo Beddelaan DAT in MP4, wmv, MOV (QuickTime) iwm
Qeybta 2: More fursadaha: DAT Converter Free, DAT Converter online
Qeybta 2: Su'aalaha ku saabsan ciyaaro file AVSEQ01.DAT
Tutorial hoose waxay kuu sheegi doonaan sida ay u badalaan DAT in MP4 ama MOV for Windows (Windows 10 ka mid ah). Haddii aad raadinayso sida loo badalo DAT in MP4 ama MOV u Mac (Yosemite ka mid ah). Fadlan guji kaliya halkan .
1. Import DAT videos to this video DAT Converter
Tag "Beddelaan" tab> riix "Add Files" ikhtiyaar in this app ee Murayaad bidix xitaa aad disk adag. Ka dibna dooro video DAT faylasha aad rabto in aad soo dhoofsadaan. Ka dib markii in, waxaad ogaan doontaa files, kuwaas oo si degdeg ah loo dari doonaa Murayaad ee app this.
(Ikhtiyaar) Wakhtigan, haddii aad u baahan tahay in ay isku biiri dhammaan faylasha dhoofiyo file hal, kaliya awood "midowdo oo dhan videos galay mid ka mid file" doorasho hoose ee interface ka.
2. Dooro qaab wax soo saarka sida MP4, wmv, MOV (QuickTime), iMovie iwm ah
Fur liiska qaab saarka this app ee garaacida ah "Qaabka" icon. Ka dibna dooro mid ka mid ah qaabab video ama presetting filaayo in aad rabto.
Haddii loo baahdo, waxa kale oo aad ka bedeli kartaa kale oo xuduudaheedu video sida Resolution, Rate Inyar, Rate jir ah iyo in ka badan. Si aad u yeeshaan, kaliya ku dhufatey "Settings" doorasho ku Murayaad Qaabka Output in la furo ay suuqa kala dejinta, dooro goobaha sida aad rabto, ka dibna riix "Ok" si ay u badbaadin.
3. Start DAT video diinta
Beddelaan files DAT in qaabka aad dooratay adigoo riixaya ah "Beddelaan" button ee geeska hoose ee midigta ah interface this app ee. Next, waxaad ka arki kartaa bar horumarka qaab beddelidda in ay leeg- tahay tan app ee, taas oo ku tusineysa markii soo hadhay ay sidoo kale.
Markii diinta la dhammeeyo, waxa aad heli kartaa in folder saarka of this DAT ee Video Converter adigoo riixaya "Folder Open" doorasho. Just raaxaysan files wax soo saarka. Haddii aad rabto in aad iyaga u ciyaaro qalabka qaar ka mid ah, tallaabo dheeraad ah waa in lagu wareejiyo files wax soo saarka si ay u qalab aad.
Video Tutorial: Sida loo Beddelaan DAT in MP4, MOV in Windows (Windows 10 ka mid ah)
Qeybta 2: More fursadaha: Free Converter DAT MOV MP4, DAT online MOV MP4 Converter
Waxaad u isticmaali kartaa si lacag la'aan ah loogu badalo VCD in QuickTime Movie ama FCPX.
Pro: dhamaystiran Converter DAT free
1. Diinta Free caadi videos, 3D iyo HD videos ma taageersana.
2. Waxaad si toos ah in qalabka sida iPhone, iPad, telefoonada Android, iyo qaar kaloo badan u bedeli karaan.
3. Waxa kaliya ee aad leedahay 10 jeer diinta xawaaraha si dhakhso ah.
4. Version ayaa lacag la'aan ah ma taageeri DVD gubanaya.
Waa DAT Converter wejiyo online. Waxa kale oo ay ka shaqayn kartaa sidii Converter maqal ah, Converter image, Converter eBook, iwm
Pro: 1. Waxaad u bedeli karaan DAT online aan soo degsado ah software-saddexaad.
1. Xawaaraha diinta waa u gaabiyaa.
2. Waxaad u bedeli karaan oo keliya files ka yar 100MB.
Qeybta 3: Su'aalaha ku saabsan ciyaaro file AVSEQ01.DAT
Su'aal: Waa maxay file DAT ah?
inta badan Waxa jira saddex nooc oo ah files leh .dat extention: file xogta guud, file Winmail.dat loo isticmaalo in email, iyo VCD video files. Oo mid saddexaad waa waxa aan ka hadlayno. Video DAT A waxaa inta badan loo isticmaalaa in uu kaydiyo MPEG-1 encoded il video on VCD ama SVCD cajalladaha. Xaaladaha intooda badan, ka videos DAT way adag yihiin si aad u ciyaaro. Sidaas diinta DAT si loo jecel yahay, heerka qaabab video waa lagama maarmaanka u ah isticmaalka ballaaran.
Su'aal:? Waa maxay sababta aan u furi karaan faylka avseq.dat on Windows iyo Mac
Waxaad u baahan tahay in ay isticmaalaan barnaamijka dhinac saddexaad ah si loogu badalo DAT in QuickTime, ama badalo DAT in MP4. Markaas waxaad ka daawan kartaa filim ku saabsan file avseq.dat.
Haddii aad tahay la dhacay shaqada awood Video Converter Ultimate, kaliya waxa ay isku dayaan hoos ku qoran.